Ny endri-tsoratra Hippie tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Andeha isika hanao toy ny protagonista ao ambadiky ny sarimihetsika ho avy, fa isika Hivezivezy any amin'ny lasa izahay hanolotra anao karazana endri-tsoratra hippie.
Ny folo taona amin'ny taona 70 dia dingana ara-tantara misy hetsika ara-tsosialy sy fironana ara-kolontsaina maro izay nandray anjara tamin'ny sehatry ny zavakanto an-tsary. Anisan'ny mampiavaka an'io vanim-potoana io ny ny filan'ny fiaraha-monina maneho hevitra amin'ny fomba tafahoatra, amin'ny alalan'ny mozika, fitafiana ary zavakanto.
Ny hetsika hippie dia iray amin'ireo fironana nanamarika ity vanim-potoana malaza ity ary nisy fiantraikany teo amin'ny sehatry ny maso izany.
1 Ny fiantraikan'ny taona 70
2 litera hippie
2.2 Lavitra lavitra
2.4 Spice vary
2.5 Hetsika Hippie
2.9 Voninkazo Bold Font
2.13 paosy andilany
2.14 Vakana kibo
Ny fiantraikan'ny taona 70
Nihodina 360 degre ny famolavolana endri-tsoratra, Niala tamin'ny fomba nentim-paharazana hatramin'izao ny endrika, ary nanomboka nipoitra ny endri-tsoratra retro tamin'ny taona 70, natao tamin'ny tanana, karazana litera ary endrika maimaim-poana.
Iza no tsy mahatsiaro ny famantarana ny disco tamin'ny taona 70, miaraka amin'ny sasany endri-tsoratra lehibe miaraka amin'ny fiainany manokana, aingam-panahy avy amin'ny jiro neon.
Amin'izao fotoana izao dia mampiditra azy ireo teknika fanoratana vaovao, toy ny Letraset, takelaka misy endritsoratra, ary singa hafa azo afindra; ary ny Visual Graphics PhotoTypositor, izay nampiasa tsipika miiba lehibe misy ireo tarehintsoratra. Ireo teknika roa ireo dia manampy amin'ny fanamorana sy mora kokoa ny fizotran'ny famindrana endritsoratra.
Ny taona 70 dia nanatri-maso hetsika sy fironana ara-tsosialy isan-karazany, izay nankasitraka ny endriky ny karazana typography. Ireo endri-tsoratra ireo dia miroborobo amin'ny toetrany, manitatra ny serif sy ny fiafarana.
Raha mazava tsara, inona avy ireo lafiny manaitra indrindra amin'ity karazana endri-tsoratra ity, ity ny lisitry ny endritsoratra voataonan'ny taona 70.
Izy io dia endri-tsoratra izay manome voninahitra ny ody tamin'ny taona 70. Manana ny toetrany mifarana amin'ny endrika curl ary boribory ny sisiny, dia afaka mitarika antsika hahatsiaro ny lohatenin'ny sariitatra tamin'ny fahazazantsika. Ity endri-tsoratra ity dia miaraka amin'ny katalaogin'ny litera lehibe sy kely.
Endri-tsoratra aingam-panahy tamin'ny taona 70, izay manolotra endri-tsoratra misy sisiny boribory. Misy fiantraikany mazava amin'ny hetsika hippie tamin'izany taona izany. Ankoatra izany, dia misy andian-dahatsoratra Kisary 22 natao tanana mba hanampiana amin'ny famolavolana.
Amin'ity tranga ity dia a typography mavesatra sy funky mahazatra amin'ny taona 70, voataonan'ny doka sora-tanana. Endri-tsoratra izay manolotra ligature isan-karazany ho an'ny litera, manome toetra mahafinaritra ho an'ny endri-tsoratra.
Ny hetsika hippie dia eny amin'ny rivotra miaraka amin'ity endri-tsoratra ity. Typografia misy filaharana midadasika amin'ny endri-tsoratra, ankoatra ny fiafaran'ny teboka tsirairay amin'ny literany. Ao amin'ny sasany amin'ireo endri-tsoratra dia afaka mahita isika haingon-trano singa amin`ny fotoana ny famaranana ny taratasy kapoka.
Izy io dia endri-tsoratra izay azonao ampiasaina manokana. Izy io dia endritsoratra tonga lafatra ho an'ny endrika aingam-panahy tamin'io vanim-potoana ara-tantara io. Izy io dia manolotra katalaogin'ny tarehin-tsoratra feno, na ny litera kely na ny lehibe. Ary koa, a Ny singa mahatsikaiky amin'ity endri-tsoratra ity dia ny mariky ny lantom-peony dia mariky ny fiadanana.
Typeface andrana noforonin'i Sergiy Tkachenko. Loharano misy sasany izy io kapoka matevina sy boribory. Eo amin'ireo endri-tsoratra dia ahitana fiafarana roa samy hafa tanteraka, ny iray boribory ary ny iray mahitsy tanteraka. Ankoatra izany, milalao amin'ny singa haingon-trano izy mba hanomezana feo ny taratasiny.
Raha karazana endri-tsoratra nentanin'ny etikety tamin'ny fotoana no tadiavinao dia Alt Retro ity. ity loharano ity, milalao amin'ny andalana ho fitaovana hanamboarana ny taratasiny. Misy karazana lanja dimy samihafa mba hamoronana endrika manintona.
endri-tsoratra mahafinaritra miaraka amin'ny fomba bubble mifototra amin'ny taona 70. Greta, dia aseho amin'ny karazany roa eo amin'ny toetrany, feno sy voasoritra. Endrika tsy ara-dalàna izy io, tsy mitovy ny endri-tsoratra rehetra ao aminy, samy hafa ny kapoka, ny maso ary ny haavony amin'ny tsirairay amin'izy ireo.
Voninkazo Bold Font
Raha mitady karazana karazana hippie ianao dia asehoy anao ohatra hafa tsy mitovy amin'ny teo aloha. ankapobeny amin'ny litera misy tsipika matevina sy voninkazo napetraka stratejika amin'ny endri-tsoratra isan-karazany.
Izy io dia typography izay toa fingotra elastika noho ny bikany. Izy io dia endri-tsoratra hippie ho an'ny endrika tena 60s sy 70s. Ny toetrany, tsy mandeha amin'ny lalana mitovy izy ireo, fa samy manana ny fihetsehana amin'ny lalany avy.
Typography hetsika hippie sy fomba retro. Hippie Mojo, manana andiana tarehintsoratra sy glyph feno amin'ny fiteny maro, ary koa tarehintsoratra hafa.
Izy io dia endri-tsoratra misy tsipika boribory, izay miteraka fahatsapana hippie antitra. Typography tsy misy afa-tsy tarehin-tsoratra lehibe izy io.
Iconian Fonts dia manolotra Hip Pocket, a karazana hippie be mpampiasa. Manana endrika 14 samihafa izy io mba hanomezana rivotra ny taona 60 amin'ny endrikao. Typeface karama izy io, tsy maintsy mahazo fahazoan-dàlana hampiasa azy ara-barotra.
Mifototra amin'ny hetsika hippie, Belly Beands dia endri-tsoratra izay milalao amin'ny haben'ny toetrany miaraka amin'ny tanjona hananganana tarehimarika amin'ny alàlan'ny fametrahana ny litera.
Ny endri-tsoratra Aprilia dia endrika an'ny taona 70 ary anisan'ny tsy hay hadinoina indrindra amin'ny sehatra. dia miorina amin'ny voninkazo Aberilla sy ny endriky ny felany, izany no antony ahitantsika tsipika miolikolika amin'ny endri-tsoratra, izay mahatonga ny endrika ho kanto kokoa.
Ny taona 60 sy 70 dia feno fitaomana ara-kolontsaina izay nitaona ireo matihanina amin'ny famolavolana sary, noho ny fampiasana loko, endrika typography na fomba fanoharana, ho an'izany rehetra izany, ity. vanim-potoana dia iray amin'ireo tsaroana indrindra eo amin'ny tontolon'ny zavakanto.
Manantena izahay fa ity lisitr'ireo endri-tsoratra hippie izay tsy lany amin'ny endriny ity dia hahasoa anao amin'ny tetikasa ho avy, izay hanomezanao toetra tsara amin'ny endrika rehetra. Izy ireo dia endri-tsoratra izay tsy havelany, eo anelanelan'ny taona 2014 sy 2015, dia nanana laza be izy ireo tamin'ny famolavolana tranonkala sy sary.
Raha tia an'ity hetsika ity ianao dia manasa anao izahay hahita ny fomba fanoratanao ankafizinao amin'izao vanim-potoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny endri-tsoratra hippie tsara indrindra